China China ezimise Isefu welding enemingxuma Kucingo olubiyele for Solar izityalo yoMvelisi kunye noMthengisi | Pro kocingo
I-PRO.FENCE ivelisa kwaye isasaze uluhlu lwecingo lokucoca umnatha ukuhlangabezana nezicelo ezininzi. Ezifana nocingo olubiyele lwe-3D, i-anti-climb fence, i-welding mesh ucingo. It is a ucingo sentsimbi usebenzisa ucingo welding kunye kuqala kwaye emva koko kufuneka ukugoba umatshini ukwenza ezahlukeneyo ezimilise kwiqela lenjongo. Iingcingo zeepaneli zentsimbi ziyasetyenzwa ukuze zilingane ngokuqinileyo kunye, zenze umqobo wokuqina kunye nokuhlala ixesha elide.
Uyilo lwePROCE kunye nokuvelisa olu hlobo locingo lwe-3D egobileyo yocingo lwesicelo samandla elanga. Siya ikakhulu kubonelela eshushu-nkxu kwalenza kwaye ngaxesha lithile abathengi bethu bafuna umgubo ngokupheleleyo wawutyabeka okanye PVC wawutyabeka ngokunjalo. Isiseko, zimbini iindlela onokukhetha kuzo kubandakanya iimfumba zomhlaba, ibhloko yekhonkrithi. Sicebisa ukuba iimfumba zokonga zigcine ixesha lokwakha ukuba iprojekthi ibekwe kwindawo enzima.
Ihlala isetyenziswa kwizityalo zamandla elanga, iifama zelanga, kodwa inokusetyenziswa kwipaki yemizi-mveliso, ekwanti kwendlela.
Ubungakanani bePaneli: H500-2500mm × W2000mm
Iposi: φ48 × 1.5mm /50 × 70 × 1 1.5mm
Kugqityiwe: Hot nkxu kwalenza / Powder wawutyabeka / PVC wawutyabeka (Brown, Mnyama, Mhlophe)
Inkqubo kumgangatho wekhabhoni yocingo ngamandla amakhulu oxinzelelo, kwaye uyigqibe kwindawo eshushu edityanisiweyo yentsimbi (zinc isonge ukuya kuthi ga kwi-450g / m2), uyihlanganise usebenzisa izixhobo ze-SUS 304. Abo badlala indima ebalulekileyo kwi-anti-corrosion. ISIQINISEKISO SOKUBHALA akukho rusting ubuncinci iminyaka emi-6.
Inephaneli enemingxunya, iiposti kunye neemfumba zomhlaba. Isakhiwo esilula siya kunceda ukufakela ngokulula kwindawo. Isithuba phakathi kweeposti sinokulungiswa apho kunokwenzeka khona nakwintaba enzima ethambekileyo.
Into NO.: PRO-01 Ixesha Lead: 15-21 DAYS Imveliso Orgin: CHINA
Egqithileyo Iphaneli yocingo lwesinyithi esenziwe ngesicelo sokwakha
Okulandelayo: I-3D egobileyo yocingo oluthambileyo locingo, ucingo oluthandwayo lwe-mesh ucingo njengocingo lokhuseleko lokuhlala eMntla Melika
3D egobileyo welding ucingo ucingo, ethandwa mesh umnatha ...
C-ezimilise Powder Camera welding mesh Fence For Po ...